Pakistan vs Zimbabwe - latest cricket news, match reports & comment
A mismatch though but the Lilliputians almost chained the Gulliver in the T20I series, winning the second and losing bravely in the rest of the first and third match.
Misbah-ul-Haq, the head coach of Pakistan men’s national cricket team, interacted with media via videoconference call today, after the conclusion of the two-Test match series against Zimbabwe.
Babar Azam, the captain of Pakistan men’s cricket team, interacted with media via videoconference call today, a day ahead of the second and final Test match against Zimbabwe.
Babar Azam, the captain of Pakistan men’s cricket team, interacted with media via videoconference call today, a day ahead of the first of two Test-match series against Zimbabwe.
Misbah-ul-Haq, the head coach of Pakistan men’s cricket team, interacted with media via videoconference call today, a day ahead of the first of three T20I match series against Zimbabwe.
The 2nd of the three-match T20I series between Pakistan and Zimbabwe will be played at the Rawalpindi Cricket Stadium
The 3rd and the last game of the three-match ODI series between Pakistan and Zimbabwe will be played at the Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi in Pakistan.
One-up in the series, Pakistan were happy to give ODI debut to Haider Ali and Mohammad Musa – two of the exciting youngsters in the 15-man squad.